Ifulethi elitofotofo kumbindi wedolophu eneendawo zokupaka zabucala
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguZuzana
Yonwabela ukufikelela ngokulula kuyo yonke into kule ndawo igqibeleleyo. Le ndlu ekhethekileyo ifihla induduzo kunye nomoya wesixeko esinoxolo, esizisa intendelezo yangasese embindini wendlu. Le ndlu ikwindawo yokuhlala esanda kwakhiwa iTaban embindini wedolophu endala. Iivenkile, iikhefi, izikhumbuzo zembali ziphantsi kweefestile ngokoqobo.
Le ndlu ikwisakhiwo esitsha esinegaraji engaphantsi komhlaba, apho unokumisa khona imoto yakho simahla. Kukho igumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini kunye newodrophu eyakhelweyo, ikhitshi elinobunewunewu elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye netafile yokutyela. Kwigumbi lokuhlala kukho ibhedi ye-sofa ene-mattress eyakhelwe ngaphakathi, apho abantu abadala be-2 banokulala ngokukhululekile. Igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo lineshawa, isinki kunye nomatshini wokuhlamba. Indlu ibekwe kumgangatho woku-1, inethafa ebanzi apho unokonwabela ukukhanya kwelanga ekwindla. Ibhedi yomntwana iyafumaneka xa iceliwe. I-wi-fi yasimahla kunye ne-TV yinto eqinisekileyo.
Indlu yokuhlala ibekwe kumbindi weNitra, kumgama wokuhamba wezikhumbuzo zembali, iithiyetha, iikhefi kunye neevenkile. Indawo yabahambi ngeenyawo ikwi-300 m ukusuka kwindawo yokuhlala. Mlyny Shopping Centre - 100 m, Tesco - 50 m, Market Market - 70 m.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$4472
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nitra